Dow of Dogs - ထပ်မံလုပ်ပါ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
နိုဝင်ဘာလ 28, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, အဆိုပါ Dow 2020 ၏ခွေး, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အသားပေးသတင်းများ, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats
တစ် ဦး တည်း Dividend ဝင်ငွေအတွက် 4% နီးပါး
နှစ်စဉ်တစ်သက်တာ 14.03% ပြန်လာ
(စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးသည် 11-25-19 ကဲ့သို့အခကြေးငွေမယူပါ။ )
Durig ရဲ့ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ ထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် စတော့စျေးကွက်ထက်မတည်ငြိမ်မှုလျော့နည်းနှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမြတ်များဝင်ငွေမြင့်မား။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကျော်ကအစုစုကိုရှိပါတယ် မြတ်များဝင်ငွေနီးပါး 4% ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် တစ်ယောက်တည်းနှင့်တစ်ခုရှိပါတယ် နှစ်စဉ် 14% ၏တစ်သက်တာပြန်လာမှု။ တကယ်တော့ Durig ရဲ့အစုစု နှစ်စဉ်တစ်သက်တာပြန်လာမှုနှင့်အနီးဆုံးအခြေခံစံနှုန်း * ကို 2% နီးပါးကျဆင်း.
Durig ရဲ့အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်းအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရွေးချယ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအခြေခံစစ်ထုတ်မှုများမှာမပြောင်းလဲပါ။
နှစ်ကုန်တွင်, ရေ မျက်နှာသာပေးမှုမှထွက်ပေါ်လာသောအမြတ်အစွန်းအများဆုံးအစုရှယ်ယာစုစုပေါင်းအုပ်စုများကိုရည်ညွှန်းသည် Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ (DJIA) နှင့်ယခုနှစ်ကြာချိန်အဘို့ထိုသူတို့ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤ“ ခွေးများ” သည်သူတို့၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍“ ပြေးရန်နေရာပိုများ” လေ့ရှိသည်။
ဤနည်းအားဖြင့် Durig သည်အစုစုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်၊ ပိုမိုမြင့်မားမြတ်များဖမ်းယူ Dow Jones တွင်ဖော်ပြထားသောအမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်း (အမြတ်ငွေပေးဆောင်ခြင်းအပေါ်လေးစားမှု ရှိ၍) အပြာရောင်ချစ်ပ်စတော့ရှယ်ယာအချို့၏။
စောစောအနားယူချင်ပါသလား? သင့်ကို ၀ င်ငွေပိုမိုရရှိစေရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောထိပ်တန်းအစုစုဖြင့်အမြန်သွားပါ။
ရေရှည်ဘယ်မှာလဲ Durig ၏ Dow Portfolio ၏ခွေးများသည်သာလွန်ကောင်းမွန်နေဆဲဖြစ်သည်ကျော်စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကနှစ်စဉ်ပြန်လာနှင့်အတူတစ်သက်တာပြန်လာအတွက်၎င်း၏ရွယ်တူချင်း outperforming မြတ်များဝင်ငွေတစ်ခုတည်းတွင် 14% နှင့် 4% နီးပါး.
အပြာရောင် Chip တန်ရာ
သမိုင်းကြောင်းအရအပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေမှုစတော့များသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြသခဲ့သည် ဖိအားအောက်မှာဒဏ်ခံဖြစ်လိမ့်မည်, ခက်ခဲတဲ့စျေးကွက်များတွင်ဆွေမျိုးတည်ငြိမ်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ အပြာရောင်ချစ်ပ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ခိုင်မာသောအခြေခံများကြောင့်ခွဲဝေချထားမှုမရှိသောပေးဆောင်ရသည့်အစုရှယ်ယာများထက်စျေးကွက်ဖိအားမှပိုမိုကောင်းမွန်သောခုခံနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ခုန်ထွက်နိုင်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်မငြိမ်မသက်မှုများအတွင်းပိုမိုရှုပ်ထွေးသော (နှင့်ဒဏ်ခံနိုင်သော) အစုရှယ်ယာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ညီမျှလေ့ရှိသည်။
ဤတည်ငြိမ်မှုကိုစတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းနှင့် / သို့မဟုတ်ခွဲဝေမှုများတွင်သာမကမြင်တွေ့ရလေ့ရှိသော်လည်းကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေ၊ ဘဏ္sာရေး၊ ကြီးထွားမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင်ကြိမ်ဖန်များစွာတွေ့ရသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ခိုင်မာတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကများသောအားဖြင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအများကြီးပိုကောင်းလာတယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြတ်အစွန်းနှင့်ညီမျှခြင်းနှင့်သူတို့၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ငွေများများထည့်ရန်ကူညီခြင်း၊.
အပြင်တည်ငြိမ်မှု, အပြာရောင်ချစ်ပ်ခွဲဝေမှုသည်လက်ရှိ ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေရန်ကူညီသည် နှင့်လေ့ ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်း outpaceအဖြစ် ခွဲဝေ (နှင့်ဝင်ငွေရရှိမှု) ပုံမှန်အားဖြင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးထွားအစုစုအတွင်းအရင်းအနှီး၏ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းကိုထိန်းသိမ်းနှင့် သင့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရရှိသောဒေါ်လာ၏တန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းခြင်း.
Durig's တွင်ပါဝင် အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ ပို။ ပင်အကျိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ် အခွန်အဆင်ပြေ အကောင့် (တစ် ဦး အငြိမ်းစားအကောင့်လိုပဲ) ။ အမြတ်အစွန်းနှင့်အမြတ်ငွေ ၀ င်ငွေတို့ကိုလည်းအခွန်ကောက်ခံခြင်းမရှိပါ အစုရှယ်ယာများသည်အခွန်လွတ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြီးထွားလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသူတို့၏ ၀ င်ငွေရရှိမှုပိုမိုရရှိစေနိုင်သည်.
အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ခွဲဝေပေးချေမှုများသည်အရှုံးကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုကိုပိုမိုစုံလင်စေရန်နှင့်ဖြည့်စွက်ရန်ကူညီသည်။ က မကြာသေးမီဆောင်းပါး ဥပမာတစ်ခုပေးသည်။
သမိုင်းမတည်ငြိမ်မှုလျော့နည်းခြင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ချောချောမွေ့မွေ့ပြီးပျော်စရာကောင်းစေသည် စတော့ဈေးကွက်သည်အလွန်အမင်းအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးနေရာတွင်မပါ ၀ င်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်တန်ဖိုးနည်းတစ် ဦး ချင်းစီအကောင့်?
အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူအများစုသည်စုပေါင်း / အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပါ ၀ င်ကြသည်။ အကျိုးအမြတ်များနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမျှဝေရတာဟာကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်ကတော့စုပေါင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်း၊ အခွန်မတတ်နိုင်သောများပြားစွာဖော်ပြခြင်းမပြုရန်.
ရေကူးကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်များသောအားဖြင့်အများပြည်သူသုံးရေကူးကန်နှင့်ကလေးများများစွာတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ရေကန်ထဲမှာဆီးရှိလိမ့်မယ်လူတိုင်းသိတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်တစ် ဦး ချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရေကူးကန်တွင်ရေကူးခြင်းနှင့်တူသည် (၎င်းသည်ပိုမိုသန့်ရှင်းသည်။ Pee ရှိပါကအနည်းဆုံးသင့်အတွက်ဖြစ်သည်).
ပေါင်းထားသည့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုရှောင်။ Durig's ကဲ့သို့တစ် ဦး ချင်းစီမံခန့်ခွဲသောအကောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်အကောင့်နှင့်လိုက်ဖက်သည့်အခွန်သက်ရောက်မှုများနှင့်ပိုမိုတိကျသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်ပါရှိသည်။
Durig ရဲ့ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ ရှိပါတယ် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏သက်တူရွယ်တူများကိုသာလွန်နေဆဲဖြစ်သည်နှင့်အတူ လျော့နည်းမတည်ငြိမ်မှု။ အစုစုကိုဒီဇိုင်းအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည် 4% နီးပါးကို dividend ဝင်ငွေဖြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင့်အားခွင့်ပြုသည် ညမှာပိုလွယ်အောင်အိပ်ပါ.
တိုးမြှင့်ရှာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ဝင်ငွေတည်ငြိမ်ရေး in လျော့နည်းမတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူမြတ်များဝင်ငွေမြင့်မားထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းတစ်ခုအစုစု စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်နှင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုအပြည့်ရှိသော Durig's ထက် အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ အတူထူးချွန်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှု အားလုံးအလွန်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာ။
ခွငဖြေ - အတိတ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ကအနာဂတ်အောင်မြင်မှုရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ ပြသမဆိုစွမ်းဆောင်ရည်ဒီထုတ်ဝေ 11-25-19 ၏အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ * အဓိကအသုံးပြုသောအခြေခံစံနှုန်းမှာ SPDR Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ETF ဖြစ်သည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွင် Durig Capital မှတင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် Durig Capital မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များမဟုတ်သကဲ့သို့လုံခြုံရေး ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီမှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုတောင်းခံသင့်သည်။
4% ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာ အပြာရောင် Chip စတော့ရှယ်ယာ အပြာရောင်ချစ်ပ် ကိုကာကိုလာ အများပိုင်သတင်း csco cvx အမျိုးမျိုး ခွဲဝေ ပိုင်းခြေဝင်ငွေခွန် ခွဲဝေမှုအထွက်နှုန်း ခွဲဝေအထွက်နှုန်း Dividends đi DJIA ခွေး အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ S & P 500 ၏ခွေးများ dow Dow Jones Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ရေ Durig Capital ကို ရှယ်ယာ မြင့်မားသောမြတ်များအထွက်နှုန်း မြင့်မားသော Dividend အထွက်နှုန်း မြင့်မားသည် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း မြင့်မားအထွက်နှုန်းထိတ် IBM က ဝငျငှေ ဝင်ငွေအမျိုးမျိုး ဝင်ငွေနည်းဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ jnj ဇူလိုင်လ ko တစ်သက်တာ မိုက်ကယ် B Higgins mrk Nasdaq နိုဝင်ဘာလ NYSE ပိုကောင်းအောင် ပိုကောင်းပါတယ် performance pfe pg အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ Postmates သုတေသန ပြန်လာ ပြန်လည်သုံးသပ် စတော့ရှယ်ယာ စတော့ဈေးကွက် စတော့ရှယ်ယာ ဘဏ္.ာရေး us အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု vz လမ်းလျှောက် WKB xom အသားပေး
ပူတင်၏ရုရှားသည်ဂျီနီဗာသဘောတူညီချက်၏အဓိကအပိုင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်း - ဤသည်မှာစည်းမျဉ်းမရှိသောစစ်ကိုဆိုလိုသလား။